HomeWararka Ciyaaraha MaantaRodriguez oo beeniyay isku dhac xulkiisa kadib markii guuldaradii kasoo gaartay xulka Ecuador.
November 20, 2020 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Ciyaaryahanka reer Colombia James Rodriguez ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya inuu ku lug lahaa isku dhac ka dhacay qolka labiska ka dib markii xulka qaranka ay guuldarro 6-1 ka soo gaartay Ecuador ciyaar ka tirsan isreebreebka Koobka Adduunka toddobaadkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Everton ayaa sheegay in wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan iska hor imaadka u dhexeeya asxaabtiisa ka dib guuldaradu ay yihiin “sumcad xumo” loogu talagalay inay khilaaf ka dhex abuurto kooxda dhibtooneysa.
“Waan DIIDAY dhammaan noocyada macluumaadka la sheegayay ee ku saabsan dhaqan xumada, gardarada, khilaafaadka ama nooc kasta oo muran ah oo u dhexeeya ciyaartoy taasna waxay igu xusaysaa halyey,” Rodriguez ayaa ku yiri bayaan uu soo dhigay Twitter.
Guuldaradii ka soo gaadhay Quito ayaa ahayd guuldaradii ugu xumayd ee soo gaarta Colombia tan iyo 1977 waxayna uga tagtay iyaga oo kaliya leh afar dhibcood oo ka mid ah afartii kulan ee ugu horaysay ee isreebreebka koobka adduunka ee ay ku wajahayaan Qatar 2022
Rodriguez ayaa qiray in Colombia ay dhibtooneyso laakiin wuxuu sheegay in xulka oo ay kujiraan ciyaartoy khibrad leh oo ka kala socda dhowr horyaal oo Yurub ah iyo sidoo kale Colombia ay midaysan yihiin.
“Waxaan u baahanahay inaan ka takhalusno nooc kasta oo shaki ah oo ku saabsan wada noolaanshaha iyo jawiga qolka labiska haddii aan u soo baxno Qatar,” ayuu yiri Rodriguez.